नेपाली काँग्रेस सिरहाको निर्वाचनमा को बलियो ?
नेपाली काँग्रेस सिरहाको निर्वाचनमा को बलियो ? यादव र गैर यादव मतदाताको नाराले काम गर्छ कि अन्य फर्मूलाले काम गर्छ
प्रकाशित मितिः फाल्गुन 8, 2078
नेपाली काँग्रेस सिरहाको नेतृत्व चयनको लागि फागुन १५ गते निर्वाचन हुन गइरहेको छ ।
सभापति पदको लागि चुनावी मैदानमा वर्तमान सभापति रामचन्द्र यादव र पुर्व जिल्ला उपसभापति रहि सक्नु भएको राम सुन्दर चौधरी उत्रिनु भएको छ । कसले मार्ला बाजी कसको पक्षमा २६५० मतदाता होला राजी ? सनसनी चर्चाको विषय बनेको छ । दुबै उम्मेदबार जीतको दाबी गरि रहनु भएको छ ।
स्थानीय चुनाव मुखैमा परेकोले चुनाव झन रुचिकर बन्दै जान थालेको छ । यादब र चौधरी दुबै देउवा समूहमै रहेकोले चुनाव निकै पेचिलो बनि रहेको छ । यादव र गैर यादव मतदाताको नाराले काम गर्छ कि अन्य फर्मूलाले काम गर्छ मतदाताहरुको मुडमा भर पर्छ । यादव नेता र मतदाता जसरी बिभाजित देखिएको छ यहि अवस्था रहि रहयो भने राम सुन्दर चौधरीको पलरा भारी हुने काँग्रेसीजनहरुमा चर्चा छ । राम चन्द्र यादबलाई केन्द्रीय नेतृ चित्रलेखा यादवको साथ छ भने राम सुन्दर चौधरीलाई केन्द्रीय नेतृ सीता देवीको आशीर्वाद रहेको छ ।
केन्द्रीय नेता प्रदिप गिरी स्वास्थ्य उपचारमा देश बाहिर रहनु भएको छ । अर्का केन्द्रीय सदस्य पद्म नारायण चौधरीकै उपस्थितिमा बाटिका टुरिज्ममा राम सुन्दर चौधरी सभापतिको उम्मेदबार घोषणा गर्नु भएको थियो भने एमालेको किल्ला सरे अम्बासमा फस्ट जनवरीको दिन नेपाली काँग्रेस प्रदेश २ का अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादवको प्रमुख आतिथ्य र ६ हजार नेता कार्यकर्ताको वुहत्त उपस्थितिमा राम चन्द्र यादव उम्मेदबारी घोषणा गर्नु भएको थियो ।
जति दिन नजिकिँदै जान्छ,त्यति नै मतदाता र केन्द्रीय नेताहरु कसलाई जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित गरे आफ्नो अनुकूल हुने तर्फ हिसाव किताव गर्ने निश्चित छ । गेल माघ २९ दिन बाँकी झै चुनाव हुन ७ दिन बाँकी छ । हेर्दै जाउ मैथली भनाई झै कुन गरे ऊँट बैठतै नेता कार्यकर्ता र मतदाताको मुडमा भर पर्छ यसै भन्न गाह्रो छ ।
(लेखकको फेशबुक वालबाट)